အံ့သြလောက်စရာ အနုပညာအရည် အချင်းေ တွကြောင့် တဖြည်းဖြည်း မေ့ ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ် လာခဲ့တ ယ်ဆိုတဲ့ အလင်းရောင် – Shwe Likes
အံ့သြလောက်စရာ အနုပညာအရည် အချင်းေ တွကြောင့် တဖြည်းဖြည်း မေ့ ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ် လာခဲ့တ ယ်ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်
ချစ်စ ရာကောင်း တဲ့ မျက်နှာေ လးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမေ လးတွေ ရဲ့ အသ ည်းနှလုံးကို စိုးမိုး ထားနိုင်သူဟာ မင်းသားချောလေး အလင်းေ ရာင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ လူလေးေ ချာသလို စိတ်ထားေ လးလည်းေ ကာင်းတဲ့ အလင်းေ ရာင်က သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အနုပညာေ မာင်နှမေ တွကို အရမ်းချစ်ပြီး Support ပေးတတ်သူ တစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် မှာလည်း အလင်းေ ရာင်က သူငယ်ချင်း မေ့ရဲ့ အသ စ်ထွက်ရှိလာတဲ့ “အတိတ်မေ့ရောဂါ” သီချင်းလေးနဲ့ပက် သတ်ပြီး အခု လိုပဲ သုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ဘယ်အရာ မဆို အမြဲတမ်း details ပြင်ဆ င်တတ်လို့ တဖြည်းဖြ ည်းနဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် May ရဲ့ပရိတ်သတ် ဖြစ်လာခဲ့တာ။😇 အခုလဲ ဒီသီချ င်းကို သူစပြကတ ည်းက အရမ်း သဘောကျတယ်။ ကျနော်ကို ယ်တိုင်လဲ ဒီကာလမှာ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာ အရမ်း များတော့ ဒီသီ ချင်းလေးကို စိတ်ဓာတ်ကျ ချိန်တိုင်း နားထောင်ပြီး
လဲပြိုမကျသွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို အားပေး အားတင်းရင်း feel နေခဲ့တာ။ ဒီသီချင်းကိုအမြန် ထုတ်ဖို့လဲသူ့ကို တိုက်တွ န်းရင်းပေါ့။ ဒီသီချင်း ကို သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက် တာလုပ်ပြီး MV ရိုက်မယ်ဆိုေ တာ့ ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့ စိတ်ပူနေတာ … အခုသီချင်းလဲထွက်လာရော Wow woW wOw ပါပဲ ဆရာမရယ်….
I love It 🥰 မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။😓 U Did It Again ငါ့သူငယ်ချင်းလေး … 💪🏻 နင် ဖန်တီးချင်တဲ့ သီချင်းတွေအများကြီး ဆက်ဖန်တီး နိုင်ပါစေ။ ပရိသတ်ကြီးလဲ ခံစားနားဆင်ေ ပးပါဦးနော်…” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
အလင်းရော င်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ေ ရာ အဆိုရောအပြင် အခုသီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုပါ MV ရိုက်ကူးတဲ့အထိ အစအဆုံးဖ န်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချ င်းမေ့ရဲ့ အရည်အချ င်းကို အံ့အားသင့်ဂုဏ်ယူေ နခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: ALINNYAUNG’s fb
ခ်စ္စ ရာေကာင္း တဲ့ မ်က္ႏွာေ လးနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းနီေမ လးေတြ ရဲ့ အသ ည္းႏွလုံးကို စိုးမိုး ထားနိုင္သူဟာ မင္းသားေခ်ာေလး အလင္းေ ရာင္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ လူေလးေ ခ်ာသလို စိတ္ထားေ လးလည္းေ ကာင္းတဲ့ အလင္းေ ရာင္က သူနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ အႏုပညာေ မာင္ႏွေမ တြကို အရမ္းခ်စ္ၿပီး Support ေပးတတ္သူ တစ္ေ ယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္ေခါက္ မွာလည္း အလင္းေ ရာင္က သူငယ္ခ်င္း ေမ့ရဲ့ အသ စ္ထြက္ရွိလာတဲ့ “အတိတ္ေမ့ေရာဂါ” သီခ်င္းေလးနဲ႔ပက္ သတ္ၿပီး အခု လိုပဲ သုံးသပ္ျပခဲ့ပါတယ္။
“ဘယ္အရာ မဆို အျမဲတမ္း details ျပင္ဆ င္တတ္လို႔ တျဖည္းၿဖ ည္းနဲ႔ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ May ရဲ့ပရိတ္သတ္ ျဖစ္လာခဲ့တာ။😇 အခုလဲ ဒီသီခ် င္းကို သူစျပကတ ည္းက အရမ္း သေဘာက်တယ္။ က်ေနာ္ကို ယ္တိုင္လဲ ဒီကာလမွာ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာ အရမ္း မ်ားေတာ့ ဒီသီ ခ်င္းေလးကို စိတ္ဓာတ္က် ခ်ိန္တိုင္း နားေထာင္ၿပီး
လဲၿပိဳမက်သြားေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အားေပး အားတင္းရင္း feel ေနခဲ့တာ။ ဒီသီခ်င္းကိုအျမန္ ထုတ္ဖို႔လဲသူ႔ကို တိုက္တြ န္းရင္းေပါ့။ ဒီသီခ်င္း ကို သူကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္ တာလုပ္ၿပီး MV ရိုက္မယ္ဆိုေ တာ့ ျဖစ္ပါ့မလားေပါ့ စိတ္ပူေနတာ … အခုသီခ်င္းလဲထြက္လာေရာ Wow woW wOw ပါပဲ ဆရာမရယ္….
I love It 🥰 မ်က္ရည္ဝဲမိတယ္။😓 U Did It Again ငါ့သူငယ္ခ်င္းေလး … 💪🏻 နင္ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ သီခ်င္းေတြအမ်ားႀကီး ဆက္ဖန္တီး နိုင္ပါေစ။ ပရိသတ္ႀကီးလဲ ခံစားနားဆင္ေ ပးပါဦးေနာ္…” ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။
အလင္းေရာ င္ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေ ရာ အဆိုေရာအျပင္ အခုသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကိုပါ MV ရိုက္ကူးတဲ့အထိ အစအဆုံးဖ န္တီးနိုင္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ် င္းေမ့ရဲ့ အရည္အခ် င္းကို အံ့အားသင့္ဂုဏ္ယူေ နခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: ALINNYAUNG’s fb
လက်ရှိဘဝကို တစ်ခါပြန်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ နက္ခတ်